Pfungwa dzeMunamato Kuparadza Zviitwa zveMuvengi | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pfungwa dzeMunamato Kuparadza zviitwa zvemuvengi
Jobho 5:12: Akashayisa mano emano, kuti maoko avo arege kuita basa ravo
Bhaibheri rinoti muvengi anozorora, kwete masikati neusiku, achifamba achitsvaga wekuparadza. Izvozvi, saka, zvakakosha kuti munamato unopesana nezviito zvemuvengi unotorwa zvakanyanya. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti dhiabhori haangouyi kunze kwekuba, kuuraya nekuparadza, Johane 10:10. Izvi vhesi ye bhaibheri inotsanangura zvakadzama mabasa evavengi. Nhasi tichave tichitarisa pane zvine simba munamato mapisa kuparadza zviitwa nemuvengi. Iyi minamato yeminamato ichaparadzira nemoto zviitiko zvese zvakashata zverima mumba mako. Vanamate nokutenda nhasi uye uone ruoko rwaMwari ruchikunda muhupenyu hwako.
Ipo varume vachirara husiku, zvinokufadza iwe kuziva kuti mazana evanhu havasi kurara, ivo vari kuita chinhu chimwe kana chimwe kuitira kutadzisa kana kuparadza zvinozoitika zvevamwe vanhu. Mumwe anogona kutanga kushamisika kuti muvengi anowana chii mukuita zvakaipa? kana mumwe angatanga kushamisika kuti sei Pasi rizere nehuipi hwakawanda, vanhu havagone kungogara pamwe chete murudo nerunyararo? Zvakanaka, zvakangofanana kutarisira kuti shumba haidye munhu nekuti munhu haadye shumba Icho chiri muchimiro chemuvengi kuita zvakaipa, ivo zvakasikwa zvakagadzirirwa kuti vauye nezvirongwa zvakaipa zvekuparadza vanhu. Nekudaro, zvinozove kuzvidzora kwedu pachedu sevaKristu kuti varege zviito zvavo zvakaipa.
Hupenyu hwaModhekai naHamani muenzaniso wakanaka wekutadza kuedza kwemuvengi pamusoro peumwe munhu. Hamani akanga aronga kuti Modhekai aurayiwe pasina chikonzero. Kwakanga kusiri kuti Modhekai akaita chero chakaipa kuna Hamani kuvimbisa ruvengo rwakadaro, iye aingovenga Modhekai pasina chikonzero. Saka, akaronga zano rake rekuti Modhekai aurayiwe namambo, zvakadaro, rugwaro runoti munamato wevakarurama unowanikwa zvakawanda. Kuburikidza neminamato uye kuteterera, Hamani akafira panzvimbo yaModhekai, akaurayiwa nehupfu humwe hwehupfu hwaakagadzirira Modhekai. Sezvo iwe uchiita mune ino minamato inonongedza nhasi, zvese zvakashata zvirongwa zvako Vavengi vanodzokera pameso avo mune zita raJesu Kristu.
Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti chisiri-chinzvimbo hachive nemuvengi. Munhu anofanira okutonga uye dambudziko havazovi muvengi. Nekudaro, chero murume akagadzirirwa hukuru zvirokwazvo achava nevavengi. Ichi ndicho chimwe chikonzero nei tichifanira kugara takavimbika kana matambudziko nematambudziko zvikamuka, tinofanira kuziva kuti tichava vakuru. Jesu Kirisito, munyori nemupedzisi wekutenda kwedu, kunyangwe zvake achizvininipisa, kunyangwe mweya wakasununguka uye wakanaka chimiro, akange achine vavengi vazhinji. Dhiyabhorosi ndomumwe wevavengi vakuru vanokonzeresa mabasa aKristu nekuti Dhiabhori anoziva kuti Kristu akauya kuzoponeswa kwevanhu uye nekuita kwake dhiabhori. Nekudaro, vavengi vanogara vachimuka kunyanya kana tave munzira yekubudirira.
Isu takanyora runyorwa rwemunamato manzwi ekuparadza zviitiko zvemuvengi muhupenyu hwedu. Idzi minamato yemunamato inozoparadza zvese zvakashata zvirongwa zvadhiyabhori zvakanangana neupenyu hwako uye nekwavo Sezvo kuungana kuzorwa newe, iyi minamato ichaaparadzira. Sezvo iwe uchiita idzi pfungwa dzemunamato, Ngirozi dzaIshe dzinozotumirwa munzira yako kuti dzikununure kubva muzvirongwa zvese zvakaipa zvevavengi vako. Chero gomba rakange rakucherwa iwe, vese vachawira mariri muzita raJesu Kristu.
• Baba Vekudenga, ndinouya pamberi penyu nhasi, kune mauto evavengi ari kuita kwakati kuti kuti vanditore pasi, ndinonamata iwe oh Lord kuti muparadze zano ravo pamusoro pangu muzita raJesu.
• Ishe, izwi renyu rinoti maziso aIshe anogara aripo pane vakarurama, uye nzeve dzake dzinogara dzichiteerera minamato yavo, ndinozvinyudza mukudzivirira kwako muzita raJesu.
• Mwari wekudenga, avo vanoda hupenyu hwangu vanowedzera nemasikati, asi ini ndinovanda mumashoko ako anoti hakuna nhumbi dzokurwa neni dzinobudirira, ndinotema moto waMwari pamusasa wevavengi vangu.
• Ishe, ndinonamata kuti ndimi dzose dzinondimukira mukutongwa dzidzorwe muzita raJesu. Bhaibheri rinoti nekuti ini ndakatakura mucherechedzo waKristu, munhu ngaarege kundinetsa, ndinotumira moto waMwari Wemasimbaose pamusoro pevavengi vangu vese muzita raJesu.
• Ishe nengoni dzenyu, ndinonamata kuti muvhiringidze kurwiswa kwandakaitwa nemuvengi pamusoro pangu uye muchavanyadzisa muzita raJesu.
• Ishe Mwari weKudenga, rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti ndimi Mwari wekutsiva, ndinokumbira kuti mumuke nehasha dzenyu mugotsiva vavengi vangu vese muzita raJesu.
• Ah! Ndiani anoti kana iye Mutsvene waIsraeri asina kutaura? Ini ndinouya kuzopokana nerurimi rwese urwo rwunondikurira, mhuri yangu neshamwari muzita raJesu.
• Wakavimbisa mushoko rako kuti neziso rangu ndichaona uye nekuona mubairo wewakaipa, asi hapana chakaipa chingandiwira kana kusvika padhuze pandinogara, Ishe mune gore rino, ini ndinouya kuzopesana nechero chiitiko chavo pamusoro pangu. muzita raJesu.
• Simuka Ishe uye vavengi vako ngavaparadzirwe, avo vanonzwira godo nekuvenga vanhu vako ngavapere, senge pfumo rinonyungudika kumeso kwechoto, vakaipa ngavaparadzwe muzita raJesu.
• Ini ndinokumbira kuti udzike maserafi nebakatwa remirazvo uye ivo vachatora kuchengetedzeka kwangu, maserafi anotakura pfumo rekutsiva raMwari Wemasimbaose, ndinokumbira kuti muvatumire muzita raJesu.
• Nekuti zvakanyorwa, Ndinoziva pfungwa dzandinadzo kwauri, ipfungwa dzezvakanaka kwete zvakaipa kuti ndikupe mugumo unotarisirwa. Ishe, ndinonyengetera kuti kubva nhasi, zano renyu chete. Ndichamira muhupenyu hwangu muzita rakasimba raJesu.
• Ishe Mwari, ndinonzwisisa kuti munoda kufa kwevatadzi asi kutendeuka kwavo kubudikidza naKristu Jesu. Ini ndinonamata kuti nengoni dzenyu, mushandure moyo yeavo vari kutsvaga kukundwa kwangu, ndinokumbira kuti mushandure mafungiro avo kwandiri muzita raJesu.
• Wakareva mushoko rako kuti uchatuka vanondituka uye nekuropafadza avo vanondikomborera. Uye izwi rako zvakare rakaita kuti ndinzwisise kuti iwe woga unogona kuchinja zvakaipa kuita zvakanaka. Muzita raJesu, ndinoshandura yega yega yavo yakaipa hurongwa uye zvirongwa pamusoro pehupenyu hwangu kubudirira mune zita raJesu.
• Tinokutendai anokomborera Mununuri pamusoro pemhinduro dzakapindurwa, ndinokutendai nekuti ndimi chete Mwari, hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu, ndinokutendai nekupindura, ndatenda nekuti makonzera nyonganiso huru mumusasa wevavengi vangu, kupfuura imi nekuti imi ndakonzeresa kushushikana kukuru kune vese vandishuvira zvakaipa, ndinokutendai Mudzikunuri wakachengetedzwa nekuda kwekudzivirirwa, muzita raJesu ndinonamata.
Previous nyayaMunamato weDziviriro Pakaipa
inoteveraKunamatira kwehukama hwakatsemuka
Lisa Chikumi 7, 2020 Panguva ya6: 24 pm
Ndokumbirawo mundinamatire, kuti vavengi vangu vese varonge pamusoro pangu nemhuri yangu uye neshamwari, vakundikane.Ndine vavengi vazhinji.Nekuti ini ndakamira pakurwisa zvakaipa.Naizvozvo, zivai uye musvinure kuti munamate.Ndatenda
Owan Isaac Nyamavhuvhu 13, 2020 Na 9:09 pm
Mwari vakunzwa iwe usazvidya moyo, mirira iye repply muzita rine simba raJesu Kristu mwanakomana waMwari mupenyu.
Tammy Nyamavhuvhu 29, 2020 At 9:25 am
Ndinokutendai nekuisa munamato uyu Jobho 5:12 nekuti isu tine vavengi panguva ino kuyedza kuparadza hupenyu hwedu uye ini ndanga ndisingazive munamato wekunamata uye izwi rega raJobho 5:12 rapinda pamoyo wangu richiita kuti ndinzwe ndakachengeteka Maoko aMwari naJesu Kristu. Ndatenda pa; 11 ndiri mangwanani zvakandipa runyararo muhusiku hupenyu hwatiri kurarama nevanhu ava.
Ashikoto Ndira 17, 2021 At 9:37 am
Ndokumbira mundinamatire kuti ndiwane mari yechikoro changu sezvo iri kundirwadza zvakanyanya uye inounza kushushikana kwakawanda. Ndinoda kupedzisa chikoro changu asi ini handina kugadzikana mune zvemari. Ndibatsireiwo Ishe weNazareta Amen
Patiencebhito Ndira 19, 2021 At 7:25 am
Vakashinga uye vanokurudzira munamato mapfundo
Mukoti4Life Kurume 1, 2021 At 7:37 pm
Ndinokutendai nemunamato uyu unodiwa panguva ino chaiyo muhupenyu hwangu uye neminamato yenyu yese.
maria smith Kurume 14, 2021 At 12:04 pm
ndinokumbira munamatire muchato wangu chero ndikaedza sei murume wangu anowana kukanganisa kutanga nharo ozozviparadzanisa neni.
Muporofita Collins Kubvumbi 9, 2021 At 12:06 am
Ndokumbirawo kuti murume wako anonzi ani
Aarti Yadav Kurume 15, 2021 Pa 9: 33 am
Ndokumbira kuti Unamatire Bhizinesi rangu nematambudziko angu Ndatenda nekugovana njere.
Muporofita Collins Kubvumbi 9, 2021 At 12:08 am
Ndinozivisa Isaya 60 mubhizinesi rako
Tay-Akwada Emmanuel Kubvumbi 27, 2021 At 2:59 pm
Aya minyengetero minyengetero ine simba uye nguva
Ndiri mudzidzi uyo achangobvumidzwa kupinda muzvikoro zvepamusoro kuGhana, ndakadzoka kumba kuzororo uye chimwe chinhu chakaitika izvo ndinoona zvakaoma kunzwisisa.Ndakaomesa masokisi angu nehengechefu pamutsetse uye zvakatorwa nemunhu asingazivikanwe.l stay nevabereki vangu uye isu tiri vatatu chete mumba, ndapererwa ndinamatireiwo ini
Linda Chivabvu 20, 2021 nenguva dza 3:53 pm
Ndokumbira munamatire mhuri yangu. Vavengi vedu havagoni kutipa rugare. Vanoramba vachityisidzira kutiuraya. Tinyengetererei
Olanike Oni Chivabvu 24, 2021 nenguva dza 4:28 pm
Ndatenda changamire, ini ndakakomborerwa, iwo mapoinzi anobatsira. Mwari wedzerai kuzodza kwako.
Kenya June 7, 2021 Pa 11: 33 am
Linda Chikunguru 13, 2021 At 6:04 am
Thanks alot pastor hapana chakafanana nekunamata nemagwaro amen kuti
Ndinoda minamato yose kuna Mwari.
Nekuti ndiye ega nzira.
30 Minamato yeMinamato Yekuratidzira Kwezvipo ZveMweya
Nzira Gumi Dzokufungisisa Sevatendi
Namata Uko Rudzi rweGhana